Ithebhulethi entsha yeAmazon Fire HD 10 Ushicilelo lwaBantwana kunye "neMowudi yokubonisa" yoMlilo | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Izaziso, Amacwecwe e-Android
Las Iipilisi zeAmazon ezintsha zoMlilo HD 10 iipilisi zoHlelo Baza kukonyusa ukuthengiswa kolu hlobo lwezixhobo ezivela kule nkampani, ezithengisa kakuhle kakhulu. Ingakumbi ngexabiso eliphantsi kunye nokuba yimveliso esemgangathweni.
IAmazon ikwasebenzise eli thuba ukusibeka kwi-Amazon Fire HD esemgangathweni eyindlela entsha ebizwa ngokuba yi "Show Mode." A "Bonisa imowudi" apho sidibanisa indawo yokutshaja, Siza kugqibezela utshintsho ukulandela imveliso yolonwabo; esinye sezizathu zala macwecwe oMlilo avela eAmazon.
1 IAmazon Fire HD 10 Ushicilelo lwaBantwana lwabancinci endlwini
2 Indawo yokutshaja kunye «Bonisa imowudi»
IAmazon Fire HD 10 Ushicilelo lwaBantwana lwabancinci endlwini
IAmazon ifuna qhubeka utyale imali encinci endlwini ukuze zenziwe kwixesha ledijithali esiphila kulo. Ithebhulethi ye-Android enefolokhwe "i-Fire OS" luluhlu lokudlala zonke iintlobo zomxholo kwiscreen esine-1920 × 1200 resolution.
Ngaphandle kokuba nesisombululo kwiscreen se-intshi ezili-10, IAmazon Fire HD 10 Edition yabantwana isisa kwi32GB ukugcinwa kwangaphakathi, okuthi, ngokwembono yeAmazon, kungaphezulu ngokwaneleyo ukubonelela ngomxholo wemultimedia kunye nokudlala. Ngokuqinisekileyo siyathandabuza ukuba iya kuba nini i-64GB nangaphezulu kwimveliso yolu hlobo.
Njengazo zonke iinguqulelo, ubambelele ngaphandle kunye nesoftware elula kakhulu yabancinci endlwini ukuze bonwabele umxholo wabo abawuthandayo. Okubandakanyiweyo kwiphakheji ngunyaka omnye wokubhaliselwa simahla ukufikelela kusetyenziso, imidlalo, iincwadi kunye neevidiyo. Emva kokuchitha elo xesha lasimahla, kuya kufuneka sihlawule i $ 2,99 ngenyanga ngenyanga.
Sijongene nethebhulethi enikezelwe ebantwaneni kwaye eya kuthi ibabonelele ngayo yonke into abayifunayo kwisixhobo solu hlobo. Isikrini esihle kunye nezixhobo.
Indawo yokutshaja kunye «Bonisa imowudi»
IAmazon ifuna ukuba uyiphathe amava e-Alexa angenazandla kwiscreen solwazi ukuguqula ithebhulethi yakho ibe luhlobo lwe-Echo Show. Ngamanye amagama, ungayiguqula ithebhulethi onayo isuka eAmazon ibe sisiboniso esinolwazi onokuthi usebenze ngelizwi lakho. Uluvo olukhulu lokuphinda usebenzise loo tablet ukuba usenokuba ulibele. Kwaye kukuba le software iya kufikelela kwiipilisi zeAmazon ukusuka nge-2 kaJulayi; ungaphuthelwa uphononongo esilwenzileyo lwe-Alexa.
Ngale nto, unokucela i-Alexa ngegalari yezithombe, imozulu, iindaba zamva nje nokunye okuninzi. I "Bonisa imowudi" inokuyekiswa ukubuyisa ithebhulethi yakho njengoko ubunayo. Ke Kuya kufuneka ukuba uzibuze ukuba ngaba ipilisi leyo unayo ngaphandle kokuyisebenzisa Inokuguqulwa ibe yenye yokunxibelelana ne-Alexa; ngokuqinisekileyo iya kuba luncedo kuwe.
Kwaye yonke into igqibelele, IAmazon iya kubonelela ngeedoksi ze "Show mode" iipilisi ze-HD ze-intshi ezingama-7 kunye ne-8 intshi. Le nto yenziwa yile dock kukugcina i-tablet ihlawulisiwe kwaye isebenza ngalo lonke ixesha kwigumbi lakho ukuze "unxibelelane" ne-Alexa. I-dock iya kubeka ithebhulethi kwimowudi yokuma komhlaba ngokungathi yenye yeefoto ozibeke eshelufini okanye etafileni kwigumbi lakho lokuhlala.
El Idokodo "yokubonisa imowudi" iya kuba nexabiso lokuqala le- $ 34,99 Inguqulelo yeAmazon Fire HD 8, ngelixa inguqulelo ye-intshi ezili-10 ingena kwi- $ 49,99. Ixabiso leAmazon Fire HD 10 Edition yabantwana linyukela kwi- $ 199,99. Ixabiso eliphakame kancinci kuneAmazon eliqhelene nathi ngamacwecwe alo, ke siza kubona ukuba iziphatha njani kwakamsinya nje xa ifumaneka kwintengiso kwezi ndawo.
Umbono onomdla malunga Guqula ithebhulethi yoMlilo weAmazon kwi-Echo Show kwaye usungule ithebhulethi ekhethekileyo yabantwana abaneAmazon Fire HD 10 Kids Edition. Sishiyekile, ngaphandle kwamathandabuzo, kwidock kunye nesoftware "yeNdlela yokubonisa".
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » IAmazon ibhengeza ithebhulethi entsha yoMlilo HD 10 yoVavanyo lwaBantwana kunye "neMowudi yokubonisa" yoMlilo oqhelekileyo
UXiaomi uthengise iiyunithi ezigidi ezi-5 zeRedmi Qaphela 5 kunye neRedmi Qaphela i-5 Pro eIndiya kwiinyanga nje ezi-4